I-Vale Sekoula, i-Private Villa e-Ocean enephuli
E-villa ye-"Vale Sekoula", eqanjwe ngesihlahla esinempilo egcekeni elingaphambili, ujabulele ulwandle oluyimfihlo lwesihlabathi esimhlophe, amagumbi okulala amabili, nakho konke ukunethezeka nokunethezeka ongase ukufune. Jabulela ukubuka okumangalisayo kwe-panoramic yolwandle ngenkathi ubhukuda echibini lakho langasese lamanzi anosawoti elineshawa eshisayo yangaphandle. Igumbi lokulala eliphakeme linikeza umbhede osayizi wenkosi onezicabha zesiFulentshi eziholela echibini elinombono wolwandle. I-Kayaking kanye ne-snorkeling nje izinyathelo ezingu-55 ukuya ogwini lwakho.
I-villa yethu iqinisekisiwe nge-CFC!
Bula futhi Siyakwamukela e-Matei, Taveuni, Fiji. I-Vale Sekoula ingelinye lamavillas amahle kakhulu endaweni. Itholakala kalula nje uhambo lwemizuzu emi-4 ukuya e-Matei ngezindiza ezilula noma yikuphi e-Fiji. Indiza engaphezudlwana kwehora nje ukuya eNadi International Airport.
Lapho ufika e-Vale Sekoula villa, uzobingelelwa umnakekeli wethu wendawo onobungane ukuze akubonise indlu futhi akwamukele ngesiphuzo sezithelo esenziwe ekhaya. Lungela ukucwila echibini lakho lokubhukuda elingasemuva njengoba ugqolozele olwandle. Ukushona kwelanga okuhle kakhulu kukhona lapha kuvulandi. Indlu inekhishi elinosayizi omuhle lokuzijabulisa futhi kulabo abathanda ukupheka uzozizwa usekhaya. Kulabo abakhetha ukungapheki, ungacela abasebenzi bethu basendaweni ukuthi bakuphekele ukudla okumnandi kwesitayela sase-Fiji! (Ukudla akufakiwe kumanani obusuku). Ikhishi linesitofu segesi esinohhavini nesiqandisi nesiqandisi. Kukhona indawo yokudlela evulekile negumbi lokuphumula eline-TV nomtapo wezincwadi wevidiyo. Amakamelo okulala ahlotshiswe kahle angu-2, Ibhavu Eliphelele Eli-1 elineshawa yokuhamba neshawa eshisayo engu-1 yangaphandle. Ikhaya linikeza nehhovisi lesithathu elizimele esilibiza ngokuthi igumbi lekhompyutha lalabo abangase badinge ukwenza umsebenzi omncane wenziwe kukhompuyutha yakho ephathekayo. Nethezeka futhi wehlise umoya ngaphansi kompheme ongemuva kuvulandi ongemuva ujabulele umoya ohelezayo ngokubuka olwandle olumangalisayo lwe-pacific oluluhlaza okwesibhakabhaka. Ngeke uthole idili elingcono eMatei lendlu ephelele yolwandle phambi kwendlu yokulala enekhishi eligcwele, ichibi lamanzi anosawoti, i-TV, i-wifi, amashawa ashisayo, abalandeli bophahla, amandla elanga amahora angama-24 kanye nekhaya le-Villa elinesango. Sifuna ukwabelana nomhlaba ngale ngcebo. Uyemukelwa eVale Sekoula Villa.
I-Matei iyidolobha elincane elihle lolwandle. I-Villa Sekoula iyi-villa enamasango enendawo yokupaka enhle endlini. Idolobha lethu elisogwini kulula ukuhambahamba ngezimakethe ezimbalwa zegrosa kanye nezindawo zokudlela ezimbalwa ezibangeni lokuhamba ngezinyawo. Uzoyithanda ngempela indawo yokudlela ye-Tramonto emanzini imizuzu nje ukusuka. Amatekisi namabhasi ayatholakala ukuze avakashele isiqhingi uma uthanda. I-Villa yethu iwuhambo lwemizuzu emi-4 ukuya emgwaqeni wezindiza ukuze kube lula kuwe. cishe izindiza ezi-1-2 ngosuku zifika eMatei.
Ukubuka okumangalisayo, amabhishi esihlabathi esimhlophe, izimpophoma nabanye abantu abanobungane kakhulu emhlabeni bonke benza i-Taveuni into engenakulibaleka. I-Kayaking imahhala e-villa (ama-kayak amabili aphindwe kabili) futhi ngechibi lakho langasese nolwandle, ngeke ufune ukuhamba. Kuneziqhingi ezi-4 ezincane endaweni nje yokugwedla emfushane ukusuka e-villa yethu lapho ungathatha khona ama-kayak uyozihlola. Esiqhingini sesithathu uzothola ulwandle oluhle lwesihlabathi esimhlophe ongadonsa futhi ube nepikiniki noma uphumule, cishe uzoqinisekiswa ukuthi uzoba nakho konke. I-snorkeling esuka lapha nayo inhle kakhulu! Singahlela uhambo lwama-surf ukuya kwelinye lamakhefu adumile emhlabeni wonke ohambweni lokuntweza ngesikebhe nje imizuzu engama-30 ukusuka endlini. I-Maqai ingelinye lamakhefu aseTaveuni angaguquki kakhulu. Uma ukhetha uhambo lwe-scuba diving, sinikezela ngemidanso edumile yomhlaba wonke ye-rainbow reef. Uma ufuna nje ukuphumula kanye ne-snorkel, singahlela uhambo oluhle lwe-snorkeling. I-Taveuni idume futhi ngokudoba kwayo kwezemidlalo i-Tuna, i-Wahoo nezinye izinto eziningi ezibanjiwe zesikhathi sokuphila. Izimpophoma eziningi ongazihlola, ugibele izintaba ngisho ne-waterlide yemvelo yalabo abathanda ukuzidela. Bheka izinto ongazenza e-Taveuni Fiji ku-Youtube.
Sifuna ukwabelana nomhlaba ngale ngcebo. Uyemukelwa eVale Sekoula Villa.
Ungase uqaphele ukuthi uhlu lwethu lwe-airbnb alunazibuyekezo. Singabanikazi abasha be-villa futhi ukubuyekezwa kohlu lwabanikazi bangaphambili be-airbnb akukwazanga ukudluliselwa kithi.
Nazi lezo zibuyekezo engizikopishile nganamathisela ngoba ngicabange ukuthi zizosiza.
3 Isamba Sokubuyekezwa 5 Izinkanyezi.
5 Inkanyezi Ukubuyekezwa
Angazi ukuthi ngingakuchaza kanjani okunye ukuhlala kwethu e-Vale Sekoula ngaphandle kobusuku obu-3 esabuhlala kwakungeyona into engavamile! U-Robert wayesesikhumulweni sezindiza ukuze asihlangabeze futhi asisize ngemithwalo yethu uhambo olufushane kakhulu (mhlawumbe ukuhamba iminithi elingu-1) ukuya ekhaya. Uma singena esangweni wawungabona ukuziqhenya/ukunakekelwa okuye kwangena endaweni kanye nasezingadini. Indlu ihlezi phezu kokubuka iPacific enhle ngokuphuma kwelanga okumangazayo! Leli khaya linazo zonke izinsiza ozidingayo. Isibopho esihlinzekiwe siphinde sibe nethoni yolwazi oluhle kuyo futhi kusukela ezindaweni ezikhangayo zasendaweni kuya ezindaweni zokudlela. UVinna ongomunye wabanakekeli basekhaya futhi angakulungiselela ukudla. Nakuba singayisebenzisanga le nkonzo kodwa ngokuqinisekile sizophinda ngokuzayo futhi sicabange ukuthi lena ibhonasi eyengeziwe. Umbono ovela ekamelweni uyaphefumula ikakhulukazi ekuseni lapho ilanga liphuma. Awukwazanga ukucela umbono noma indawo engcono. Leli ikhaya leholide elingcono kakhulu esake saba kulo futhi sizobuya! UVianna wabelane ngotamatisi wasengadini yakhe futhi wathembisa ukusiza nganoma yini esiyidingayo ukuze senze ukuhlala kwethu kujabulise kakhudlwana. Kuhle kakhulu ukuthi banikeze amanzi, izithelo, amathawula, isifutho sezinambuzane, nazo zonke ezinye izidingo! Futhi, sikujabulele ukuba nenketho yokubuka amanye ama-dvd kanye/noma izincwadi sisekhaya! Ngiyabonga futhi!
Ikhaya elihle eliqhelelene nje nesikhumulo sezindiza i-Matei nezitolo zegrosa nezindawo zokudlela eziseduze. Izinsiza ezisendlini zinhle futhi umgcini wendlu/umphathi umnandi kakhulu futhi uyasiza kakhulu futhi kulula ukuxhumana naye. Banesisetshenziswa esihle esihlanganisayo esinolwazi ngokudla, imisebenzi kanye nezokuthutha esiqhingini saseTaveuni. Ukubuka okuvela echibini kuyamangaza!
Ukubuka okuhle okubheke olwandle. Uhambo lwemizuzu emi-2 kuphela ukusuka esikhumulweni sezindiza. (Okunezindiza eziningi ezi-2 ngosuku ngakho kungabikho ukuphazamiseka nhlobo). Indlu yinhle, ichibi lihle.
Kuzimele ngaphandle amanzi anosawoti iyashisa i-pool
I-Matei iyidolobha elincane elisogwini elihle elinezitolo ezimbalwa nezindawo zokudlela ezimbalwa, konke okungaphakathi kwebanga lokuhamba ukusuka endlini. Ukubuka okumangalisayo, amabhishi esihlabathi esimhlophe, izimpophoma nabanye abantu abanobungane kakhulu emhlabeni bonke benza i-Taveuni into engenakulibaleka. I-Kayaking imahhala ku-villa futhi unechibi lakho langasese nolwandle, ngeke ufune ukuhamba. Kuneziqhingi ezi-4 ezincane endaweni nje yokugwedla emfushane ukusuka e-villa yethu lapho ungathatha khona ama-kayak uyozihlola. Esiqhingini sesithathu uzothola ulwandle oluhle lwesihlabathi esimhlophe ongadonsa futhi ube nepikiniki noma uphumule, cishe uzoqinisekiswa ukuthi uzoba nakho konke. I-snorkeling esuka lapha nayo inhle kakhulu! Singahlela uhambo lwama-surf ukuya kwelinye lamakhefu adumile emhlabeni wonke ohambweni lokuntweza ngesikebhe nje imizuzu engama-30 ukusuka endlini. I-Maqai ingelinye lamakhefu aseTaveuni angaguquki kakhulu. Uma ukhetha uhambo lwe-scuba diving, sinikezela ngemidanso edumile yomhlaba wonke ye-rainbow reef. Uma ufuna nje ukuphumula kanye ne-snorkel, singahlela uhambo oluhle lwe-snorkeling. I-Taveuni idume futhi ngokudoba kwayo kwezemidlalo i-Tuna, i-Wahoo nezinye izinto eziningi ezibanjiwe zesikhathi sokuphila. Izimpophoma eziningi ongazihlola, ugibele izintaba ngisho ne-waterlide yemvelo yalabo abathanda ukuzidela. Bheka izinto ongazenza e-Taveuni Fiji ku-Youtube.